ट्रिकि फलि🥇 बल 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
ट्रिकि फेलि Ball बल
अघिल्लो खेल: रेस थ्री ड्र गर्नुहोस्
ड्र रेस थ्रीडी के तपाईंले कहिल्यै राम्रो चित्रकार भएको सपना देख्नुभएको छ? के तपाईं चित्रको लागि आफ्नो प्रतिभा देखाउन चाहानुहुन्छ?
अर्को खेल: सान्ता क्वेस्ट
सान्ता क्वेस्ट सान्टा एक दुर्घटना भयो! उसले आफ्नो बाटो र सबै उपहार हरायो। उसलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
ट्रिक फॉलिing बल भौतिक विज्ञानको सिद्धान्तमा आधारित पहेली खेल हो। यदि तपाईं पजल गेम प्रेमी पनि हुनुहुन्छ भने यस खेललाई नहेर्नुहोस्। तपाईको मिशन बललाई पोइन्ट कपमा सबै all० स्तरमा राख्नु हो। प्राय सबै अवस्थाहरूमा, तपाईले धेरै कपहरू बीचको बलहरू हटाउन धेरै पटक रोक्नु पर्छ। यो ध्यान देने योग्य छ कि तपाईले प्रत्येक रोटेशन भौतिक विज्ञानको सिद्धान्तहरु अनुसार पूरा गर्नु पर्छ किनकि रजाई घुमाउँदा सानो कम्पन हुनेछ। यदि आयाम एकदम ठूलो छ भने, बल सम्भवतः पहिले अवतरण हुनेछ।
# आर्केड3DAndroidमस्तिष्कभौतिकीकौशलमोबाइलबच्चाबच्चाहरुबलआरा पजल